Ukuze imidlalo ikulethe inzuzo eninzi, thelekisa ne-horoscope. Emva koko, ngalinye iqela linalo i-tempo ekhethekileyo, iindidi zoqeqesho kunye nokuhlala kwazo. Yiloo nto yonke imidlalo, ngokuxhomekeke kumqondiso we-zodiac, sagqiba kwehlukanisa ngamaqela amane aphezulu kwaye sikubiza ngokuthi "ukuqina komzimba".
Ngaphambi kokuba ukhethe umdlalo ngokweemfuno zakho, kufuneka uzame uqeqesho oluninzi kwaye u tyelele ezininzi iintlobo zempilo. Ngoko, abavumisi beenkwenkwezi bathi ntoni ngezemidlalo kuxhomekeke kumqondiso we-zodiac?
Element: Umlilo. Izimpawu ze-Zodiac: OWEN, LION, SAGITTARIUS
Isiphelo sala bantu siza kuchitha amandla uMlilo owanike wona. Iindidi ezintle zezemidlalo ziqela zeqela elisebenzayo. Ngombulelo kwimisebenzi enjalo, unokuba ngowomzimba ophezulu ngokomzimba nangokwengqondo. Ukunqongophala kwamandla kule miqondiso kunokukhokelela kwimikhwa emibi. Kubalulekile ukuba umthwalo wenyama uhambelana noqhagamshelwano. Yingakho, imidlalo ehambelana nokucamngca, ukuzihlalisa kunye nokuphumla kunokubangela ukudandatheka kunye neentloko zaso.
Akukubi ukuzisa iintlobo ezinjalo zezemidlalo njenge-aerobic, imidlalo yeqela (volleyball, basketball), ibhayisikili, i-skating skating.
I-Element: Iimpawu ze-Zodiac ze-EARTH: I-TAURUS, VIRGO, CAPRICORN
Aba bantu bahluke kwimpilo enomdla. Kodwa imikhwa emibi iyenempembelelo embi kwimeko yakhe kunye nesimo somzimba. Izimpawu zomhlaba zixhamla kwi-slowabetism. Ukuphucula imeko kuya kunceda ukuhamba okanye ukunqumla (ukuhamba ngebhayisikili) uhamba kunye nokulungiswa kokutya. Kubalulekile ukunciphisa ukusetyenziswa kwamagalebhydrates alula (iswekile, i-pasta, i-chocolate, i-ayisikrimu, umgubo kunye nemveliso emihle), ukusetyenziswa kakubi kwezinto ezikhokelela ekukholeni kokugqithisa.
Ngomqondiso ngamnye weempawu zomhlaba, amandla, ukuqinisekiswa, kunye nokunyamezela kuyimpawu. Siyabulela oku, abantu abazalwa phantsi kwezi nqununu banamathuba amaninzi okufikelela eziphakamileyo kwimidlalo. Abavumbuli beenkwenkwezi batusa ukuba bazame kwimidlalo ye-equestrian, ukulandelela kunye nebala lezemidlalo, ukukhwela i-skating, i-gymnastics okanye imidaniso. Yonke imidlalo kufuneka ibe neshedyuli enzulu.
I-Element: Izibonakaliso ze-AIR zodiac: AMANQAKU, AMANQAKU, AQUARIUS
Impilo yenyama yabantu iyanqunywa kuxhomekeke kwimoya yokomoya, ithoni leyo exhaswa ngabahlobo abatsha kunye neengcamango. Abameli be-Air banesifo esihle se-metabolism, yingakho kunqabile ukuba bajamelane neengxaki zobunzima obukhulu. Indawo ebuthakathaka ngamava kunye noxinzelelo, okukhokelela ekusilekweni nasekudakaleni. Ubuthongo obukhulu, ukungala kwekhofi kunye nokudansa kuya kunciphisa uxinzelelo lwangokomzwelo kwaye kukukhusele kwiinkathazo eziphazamisayo.
Aba bantu bathanda ukungafani, oku kusebenza nakwizemidlalo. Ngokukhawuleza bafunde ukusebenza ngokutsha kwaye bapholise phantsi phantsi kokuzikhandla komzimba. Ngoko ke, inkqubo yokufaneleka ifanele ifake ukuquka ukutshintsha iiseti zokuzilolonga. Le nto ingaba yintlobo yeentlobo zeenkqubo zokuzimelela, iimimulator kunye nezinkimbinkimbi, ezibandakanya umsebenzi weengqondo kunye nomzimba (yoga, tai tzi). Umsebenzi ofanelekileyo owenziwe emoyeni omtsha (frisbee, badminton, speedminton).
I-Element: Izimpawu zamanzi ze-zodiac: I-CANCER, SCORPIO, FISH
Abantu abangabakwiinkalo zamanzi bazive benempilo kwaye bethandana ngesondo kuphela xa bephakathi. Olu lwalamano phakathi kwesimo sengqondo nesimo somzimba yimbangela yokuguquka kwemizwelo, i-PMS echanekileyo kunye nokuphonsa phakathi kokutya okuthe ngqo kunye nokuvumela ukusela. Indlela efanelekileyo yokuzinzisa ukuphazamiseka kwengqondo ixilisa.
Kulolu hlobo ngalunye lwezi zibonakaliso ezintathu ze-zodiac, umgangatho wesimo semidlalo yamanzi kunye nemidlalo yamanzi (uhambo oluya echibini, iiklasi ze-aerobics, ukuhamba ngomkhumbi) yiyona nto ikhethekileyo. Ukufumana iziphumo kubo kwimidlalo kubaluleke kakhulu. Oku kukukhuthaza kwabo ukuqeqeshwa, kubonga kuye abazivumeli ukuphumla. Ukongeza kwimidlalo yamanzi, ukuhamba ngebhayisikili, ukwehla kweqonga okanye ukugijima kulungile. Le mi sebenzi yezemidlalo, ngokuxhomekeke kumqondiso, uqeqeshe kakhulu inkqubo yokuphefumula, ebaluleke kakhulu kweli qela.
Izindlela ezifanelekileyo kakhulu zokulahlekelwa ubunzima
Ukulungiswa kokwakhiwa ngokuqeqesha ngokomzimba
"I-Caprese" isaladi kunye nama-strawberries
Indlela yokuziphatha xa unkosikazi
Isonka lesangqa ngamantongomane
I-Horoscope ngo-Septemba 2017 ukusuka ePavel Globa: Ziziphi iinkwenkwezi ezithembisa ngenyanga yokuqala yekwindla
Injongo yeNombolo kwiBomi boLuntu
Ziziphi iziyobisi ezingenakudliwa ngushisa?